eNasha.com - नर्तकलाई अवसर
अब तयार हुनुहोस्, अर्को रियालिटी शोका लागि । गायन प्रतिभाको खोजी कार्यक्रम नेपाली ताराको लोकप्रियतासँगै त्यस्तै किसिमको नृत्य प्रतिभा खोजी कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको दोस्रो च्यानल मेट्रोमा आउने भएको छ ।
"धेरै जसो कार्यक्रमहरु या त गायकहरु या त सेलिब्रिटीहरुलाई हेरेर निर्माण गरिन्छन् तर नृत्यकारहरुलाई लिएर कसैले पनि सोचेन", कार्यक्रमका निर्देशक प्रशन्न पौडेल भन्छन्- "तिनीहरुको जीवनस्तर बढाउन र उनीहरुको प्रतिभा बाहिर ल्याउन यो कार्यक्रमको सोच तयार भएको हो ।"
अहिले मध्यमाञ्चल क्षेत्रका नृत्य प्रतिभाहरुको अडिसन लिन आवेदन आहृवान गरिएको छ । सहभागी जति धेरै भयो, उति धेरै प्रतिस्पर्धा हुने हुनाले धेरैभन्दा धेरै सहभागीको आशा पौडेलले गरेका छन्, भन्छन्- "यो अडिसनबाट उत्कृष्ट ३२ जना छानिने छ ।"
हरेक विकास क्षेत्रबाट यसरी उत्कृष्ट ३२ हुँदै उत्कृट नृत्यकारहरुको छनोटका कारण कार्यक्रम लगातार साढे दर्ुइ वर्षम्म जम्न सक्ने उनको आशा छ । तीमध्ये उत्कृष्ट एक जनालाई भारी पुरस्कार रकम दिइनेछ । यो रकमले उसको जीवनस्तर मात्र उक्सिने होइन कि त्यसपछि उसले नृत्यमा नै अझै धेरै गर्न सक्ने सम्भावनाको बाटो खुल्ने निर्देशक पौडेलको छ ।
"डान्सरहरुको सम्भावना अरुको भन्दा धेरै छ", आफैँ पनि राम्रा नृत्यकार प्रशन्नले इनशाडटकमसँग भने- "गायकले बरु गाउन मात्र सक्छ, अभिनेताले बरु नाच्न नसक्ला तर एउटा सम्भावना नृत्यकारले राम्रो गाउन पनि सक्छ र राम्रो अभिनयसमेत गर्न सक्छ ।" यही क्षमतालाई उजागर गर्ने एउटा महत्वपर्ूण्ा कार्यक्रम हुनसक्ने उनको आशा छ ।
टेलिभिजनहरुको भीडमा एनटीभी २ ले के नयाँ काम गर्ने भन्ने सोच पलाएपछि यो कार्यक्रमको डिजाइन भएको हो । "यसमा एनटीभी २ का नयाँ महाप्रबन्धक श्रीवत्स राणाको ठूलो योगदान छ", प्रशन्न आफ्नो धन्यवादज्ञापन गर्न बिर्सदैनन् ।
कार्यक्रमका लागि न्यायाधीशका लागि पुराना नृत्य निर्देशकमध्ये विमला श्रेष्ठ र नयाँबाट भुवन श्रेष्ठ छानिइसकेका छन् । "हरेक श्रृंखलामा अर्का एक नयाँ जज पनि थपिने छन्", प्रशन्न प्रशन्नतापर्ूवक बताउँछन्- "यसले कार्यक्रममा विशुद्ध न्याय गर्न मद्दत गर्ला भन्ने हामीलाई लागेको छ ।"
यति धेरै सोचिसकेपछि त कार्यक्रम पक्कै पनि गतिलो बन्दो हो ! बधाई छ, यो टिमलाई !!